HTC na-emefu ọghọm ọzọ na azụmaahịa ekwentị ya | Gam akporosis
Edere Ferreno | | HTC, Noticias
Ọnọdụ HTC adịla njọ ruo ogologo oge, ihe anyi ima mara. Ụlọ ọrụ ahụ mechiri ọzọ afọ gara aga na ọnwụ. Iji dozie ọnọdụ ọjọọ ha na-agabiga, ụlọ ọrụ ahụ chere nyefee ika gi na ụfọdụ ahịa, ọ bụ ezie na ruo ugbu a ọ dịghị ihe mere. Ọzọkwa, ruo afọ a, enweghị ekwentị sitere na ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụ ezie na n’izu ndị a, ọ dị ka arụ ọrụ ọ bụla dị, n’ihi na a Ekwentị ahụ dị n’etiti akara ahụ agabigala Geekbench. Ma ugbu a, Azụmahịa smartphone nke HTC na-aga n'ihu na-efu nde mmadụ, afọ a. N'ezie, ha enwetaworị ego karịa site na nkewa ha n'eziokwu.
Naanị n'ọnwa Machị afọ a ka ha nwetụrụ ume, na onu ogugu enwere ugbua di nma karie, n'ime ajọ onu ogugu nke nke telephony nke ulo oru a. Mana n'ọnwa Eprel, ihe alaghachila na ihe dịka ọnọdụ nkịtị nke ụlọ ọrụ ahụ, na nsonaazụ na-adịghị mma na mfu nde mmadụ.
Ego nke Eprel na-enweta n'April bụ ihe dị ka nde 17, nkwụsị nke 71,77% tụnyere otu ọnwa gara aga, na mgbakwunye ịbụ nkwụsị nke 55% ma e jiri ya tụnyere nsonaazụ March. Companylọ ọrụ ahụ ejirila aka ya ikpughe nsonaazụ ndị a na gọọmentị. Ihe nke mere otutu ntule.
Ebe ọ bụ na e nwere ndị mgbasa ozi na-ezo ugbu a na HTC nwere ike wepu ahia smartphone n’oge na adighi anya. Ọ bụ ezie na nke a bụ asịrị adịla n’ahịa ruo ọtụtụ ọnwa. Mana ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ emeela ka o doo anya na ha chọrọ ịnọgide na-emepụta ekwentị. Agbanyeghi na n’afọ 2019, anyị n’enweghi akụkọ banyere ekwentị ọhụrụ n’akụkụ ha.
Ihe doro anya bụ na ọnọdụ ha bụ nke a na-apụghị ịkwado, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ha na-aga n'ihu na-achọ ịnọ n'ahịa nke o doro anya na ha enweghịzi ọdịiche. Yabụ, O yiri ka ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na HTC ga-ahapụ akụkụ a nke smartphones. Ihe anyị na-amaghị n’oge a bụ mgbe nke a ga-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC na-aga n'ihu na-eweta ọghọm na azụmaahịa ekwentị ya